China Colour Flake fekitori nemugadziri | Lingshou
Yakagadzirwa Ruvara Flake
Ruvara Flake 4125
Colour Flake 8013
Nhanganyaya yeRudzi Flakes
Ruvara Flakes, zvakare inowanzonzi tsviyo, machipisi, svumbunuro kana zvimedu zvidimbu etc .. Icho chinhu chakatorwa kubva kusiri nyore mashoma emaminera. Nehunyanzvi hwekugadzira zvigadzirwa, inoumba mhando yakasarudzika yehexagonal yemapepa-senge chinhu chinoitwa mune zvigadzirwa zvakashongedzwa zvinoshandiswa mumapurasitiki uye zvinhu zverabha nenzira dzakawanda-nzira nhanho kurapwa uye kurapwa kwemakemikari.
Aya maratidziro akasarudzika anopa simbi yesimbi uye inonakisa ruvara inofananidza inoratidzira iwo maitiro maitiro ezvakasikwa granite uye marble. Izvi zvekudzokera-kuzvisikwa zvekuona zvinoitika hazvigone kuitika nezvimwe zvinhu. Saka iwo mavara maruva anobatsira kuvandudza mhando yezvigadzirwa zvako kuti zvive zvinokwikwidza mumusika wako.
Kushandiswa kweMavara Flakes
Colour flakes anoshandiswa kugadzira ABS, AS, HIPP, PP uye PVC ane granite uye marble maitiro kuburikidza jekiseni uye extrusion. Ruvara rwedu runonzi rwakapfuura chitupa cheRAKUNA SVHC. Ivo vane porperties yeasidhi & alkali kuramba uye kutu kudzivisa iyo inobatsira kuderedza defuction yezvigadzirwa zvepurasitiki uye zvinoita kuti ivo vagare uye vanyore kushambidzika mukuonekwa.
Inotevera: Yakagadzirwa Ruvara Flake
Ruvara Flake 4019
AIHWA. 1, Xinfa Road ,, Lujiawa Industrial Park, Lingshou County, Hebei, China